Engelbert Humperdinck Live in Myanmar
အဖွင့်စာမျက်နှာ | ဖျော်ဖြေပွ | Engelbert Humperdinck Live in Myanmar
- - - Engelbert Humperdinck Live in Myanmar / National Theatre of Yangon + + +
FOREVER BEC-TERO တင်ဆက်သည့် Engelbert Humperdinck Live in Myanmar
ဒဏ္ဍာရီတွင်သည့် အချစ်၊ အလွမ်းအဆွေး သီချင်းအဆိုတော် Engelbert Humperdinck သည် ရန်ကုန်အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံတွင် တစ်ညတာ လာရောက်ဖျော်ဖြေပါမည်။
သူ့ရဲ့ နာမည်ကြီးသည့် တေးသီချင်းများကတော့ "Quando Quando Quando", "Release Me", "The Last Waltz", "Am I That Easy To Forget", "Spanish Eyes", "Les Bicyclettes De Belsize" နှင့် အခြားသီချင်းများစွာ ရှိပါသည်။
ဒီညဖျော်ဖြေပွဲကိုလာရောက်ချင်းအားဖြင့် မမေ့နိုင်တဲ့ သီချင်းရသများကို ခံစားရရှိလိမ့်မည့်ဟု ကတိပေးပါသည်။
Official Website: www.engelbert.com
၁၉၁၁ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျတေးရေးဆရာ ရေးပေးသည့် "Hansel & Gretel." သီချင်းဖြင့် Engelbert Humperdinckသည် နာမည်ရရှိလာခဲ့သည်။လွန်ခဲ့သော အနှစ် လေးဆယ်ကျော်လောက်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီချင်းလောကမှာ ဒဏ္ဍာရီတွင်ခဲ့သည့် နာမည်ကြီးအဆိုတော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Engelbert is managed by his son Scott Dorsey / Dorsey Productions.
- - မကြာမီလာမီ - -
ပွဲမစမှီ မိနစ် သုံးဆယ်အလိုတွင် ဂိတ်တဂါးဖွင့်ပါမည်။
30 June 2012 , 10A.M. onward.
Tags: Engelbert Humperdinck Myanmar National Theatre Yangon BEC TERO Quando Quando Quando Release Me The Last Waltz Am I That Easy To Forget Spanish Eyes Les Bicyclettes De Belsize